नेपालका दुवै ठूला पार्टी नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसको लक्ष्य एउटै हो समाजवाद स्थापना गर्ने । काँग्रेसले ०४८ सालदेखि उदारवादी पुँजीवादको बाटो अँगालेको छ तर उसले कहिल्यै पनि समाजवाद छोडेको घोषणा गरेको छैन । दुनियाँलाई ढाँट्न उससँग एउटा शक्तिशाली नाम छ, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला । नेपाली काँग्रेस, बीपी बाबुले जन्माउनुभएको, स्याहार्नुभएको समाजवादी पार्टी हो । व्यवहारमा उदार पुँजीवाद, बोलीमा समाजवाद । यो नै हो काँग्रेसभित्रको...
हामी नेपालीलाई खुसी हुन कुनै आइतबार बार्नु पर्दैन । स–साना कुराले हामीलाई खुसी दिन्छन् । जस्तो कि सोमबारको गोरखापत्रको समाचार । तपाईंले पनि सम्झिनु भएको होला, त्यहाँ लेखिएको थियो– ‘एकताका लागि १० बँुदे सहमति ।’ अर्थात् मैले अविभाजित नेकपा (एमाले) को नेतृत्वबाट बिदा लिन पाउने भएँ । अर्को मेरो कुन कुराप्रति अडिग विश्वास भयो भने, हाम्रा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नहँुदा पनि पार्टी गतिशील भइरहने भएछ । शायद त्योभन्दा...
गोरखापत्र अनलाइन असार १७, २०७८ बिहीबार
हामी त्यस्ता कम्युनिस्टभन्दा भिन्न छौँ, जो वैयक्तिक स्वतन्त्रता हरण गर्न चाहन्छन्, जो विश्वलाई एउटा विशाल गोदाम या अनुशासनको ब्यारेकमा परिणत गर्न चाहन्छन् । यहाँ त्यस्ता पनि कम्युनिस्टहरू छन्, जो वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन चाहन्छन् । उनीहरूको विचारमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता सामाजिक समानताको विरोधी हुन्छ । तर हामी कुन कुरामा प्रष्ट छौँ भने वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभावमा सामुदायिक सद्भाव बढाउन सकिँदैन ।...
गोरखापत्र अनलाइन जेष्ठ २०, २०७८ बिहीबार
अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नुभयो । नेपालमा जेमा पनि राजनीति गर्ने चलन छ । यो बजेटमा पनि नहुने कुरै भएन । यो बजेट सरकारले मतदातालाई लोभ्याउनका लागि आएको हो । पाँच सातचोटि लात खाएका जनतालाई झुक्याउन, लोभ्याउन अब राम्रो बजेट चाहिँदैन । जनताले हेर्ने भनेको काम हो । सरकारको काम राम्रो छ, जनताले समर्थन गर्छन् । काम नगर्ने सरकारले जतिसुकै राम्रो बजेट ल्याए पनि अविश्वासको ठप्पा लगाइदिन्छन् ।
गोरखापत्र अनलाइन जेष्ठ ६, २०७८ बिहीबार
विकास निर्माण कामको सबै अधिकार पालिका सरकारलाई दिने हो भने अहिलेभन्दा दसगुणा बढी काम हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । त्यो पूरा पनि हुँदै आएको छ । सबैभन्दा पछिल्लो निर्णय हो, गाउँ÷नगरपालिकाका पदाधिकारीले आपूm चढ्ने वाहनलाई नै एम्बुलेन्समा परिणत गरिदिए । एक जनाले बोलेको पनि सुनियो, ‘कर तिर्ने जनता बिरामी छन् भने म कसरी गाडी चढेर हिँड्न सक्छु ?’ वाह ! कस्तो राम्रो अभिव्यक्ति ! सलाम छ ती जनप्रतिनिधिलाई । यो हो हामीले खोजेको...
नेपालमा अमेरिकी परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) ले काम गरेको चानचुन पाँच वर्ष भएछ । त्यसको कार्यालय हायात नाम गरेको एउटा ठूलो होटलमा रहेछ । त्यसको करिब १० अर्ब खर्च भइसक्यो रे । तर, पाँच वर्षमा १० अर्ब खर्च गर्ने त्यत्रो ठूलो योजना, नेपाली जनताले यो एमसीसीको नाम गतसाल मात्र सुने । अर्थात् कम्पनीले काम थालेका चार वर्षपछि । शायद यस्तो अति नेपालमा मात्रै हुन्छ होला । बाह्य मुलुकसँगका सन्धि, सम्झौतासम्बन्धी...
गोरखापत्र अनलाइन बैशाख ९, २०७८ बिहीबार
नेपाली राजनीतिज्ञहरू अर्थहीन शब्दहरूको प्रयोग गरेर जनतालाई अन्योलमा राखिरहेका छन् । केही शब्दको परिभाषा दिन पाए नेपाली जनता आफैँले केही जान्ने थिए कि भनेर मैले यो टिप्पणी सुरु गरेको हुँ । माक्र्सवाद हाम्रो देशमा माक्र्सवादको सही पहिचान गर्ने आधा दर्जन मानिस पनि छैनन् होला ।
गोरखापत्र अनलाइन चैत्र २६, २०७७ बिहीबार
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको झगडाबाट मुक्त हुन नपाउँदै, नेकपा (एमाले) को वाक् युद्धमा फँसियो । गुटमा लाग्ने साथीहरू मुद्दा मिल्नै नसक्नेछ भन्नुहुन्छ । म भन्छु के छ मुद्दा ? सिद्धान्तको ? विचारको ? नीतिको ? म त केही देख्तिनँ यस्तो । दुई वर्षका पछिल्ला तीन महिनाको मुद्दा मुखमा टाँस्सिएको छ । जे मुखमा आयो बोल्यो । सुरुआतमै मैले भनेको थिएँ ‘जनताको बहुदलीयजनवाद पक्षधर’ हरू जाने भनेको एउटै ठाउँमा हो, त्यसैले बोल्दा होस पु¥याउँ...
गोरखापत्र अनलाइन चैत्र १२, २०७७ बिहीबार
यतिबेला दुई वटा नेकपा (एमाले) ले मानिसलाई बेजोडको मनोरञ्जन दिइरहेका छन् । दुवैले आधिकारिताको माग गरेर निर्वाचन आयोगलाई अप्ठ्यारोमा पारेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि नेकपा (ओली समूह) र नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) भनेर नामकरण गर्न बेर छैन । विधिविधान भत्काउन पौरख ठान्ने चेतना भएको देशमा ठूलाठालुलाई संविधानको धारा गन्ने चासो कहाँ हुन्छ र ! जे हुन्छ त्यहीँ कानुनसम्मत मानिदिनुपर्छ सर्वसाधारणले । अहिलेको सङ्घीय सरकारको...
फजिती होइन अब बिदा
गोरखापत्र अनलाइन माघ १५, २०७७ बिहीबार
म माक्र्सवादी हँु तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका हाम्रा नेताहरू माक्र्सवादी, लेनिनवादी हुनुहुन्छ । माक्र्सवाद स्वतन्त्रताको दर्शन हो । नेकपाका ठूला नेताहरू माक्र्सवादभन्दा लेनिनवाद उन्नत रूप मान्छन् । तर माक्र्सवाद नागरिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त हो भने लेनिनवाद सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्त हो । माक्र्स कहिल्यै अधिनायकवादी थिएनन् भन्ने सत्य उनले यसरी अभिव्यक्त गरेका छन्– ‘हामी ती कम्युनिस्टभन्दा भिन्न...